Cabiraada Muraayada Isgoysyada Karaman | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia70 KaramanCabbiraadda Masawirinta Isgoysyada Karaman
20 / 10 / 2019 70 Karaman, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Degmada Karaman, isgoyska iyo muuqaalka ciriiriga ah ee wadada ka timaada labada dhinac ee gawaarida wadada ayaa lagu arki karaa muraayadda si raaxo leh.
Agaasinka Adeegyada Gaadiidka Dawlada Hoose ee Karaman wuxuu sii wadaa dadaalkiisa si uu u fududeeyo qulqulka taraafikada isagoo muraayadaha ku dhejinaya isgoysyada meel aan lahayn aragti hoose ama cidhiidhi ah. Duqa magaalada Savas Kalayci, Isweydaarsiga Buundada Warshadaha iyo Larende Underpass ee ka baxa wadada dhinaceeda, ayaa tilmaamaysa in xaglaha aragtida ay daciif yihiin, ayaa sheegay in ay fududeynayaan qulqulka taraafikada iyaga oo dhigaya muraayadaha.
Duqa magaalada Kalaycı wuxuu sheegay inay sii wadeen howlihii yareyn lahaa taraafikada magaalada iyagoon carqaladeyn: “Maadaama degmada Karaman, abaabullada wadooyinka waxaan bilownay inaan sameysano isku-xir gaadiid nabadgelyo iyo nabadgelyo leh bartamaha magaalada. Si looga hortago shilalka taraafikada oo aan u aragno gawaarida ka imanaya dhinaca darawallada si dhib yar, waxaan ku rakibnay muraayadaha indhaha indhaha ee Isweydaarsiga Buundada Wershadaha iyo Larende Underpass. Sidan, darawalada ka imanaya isla jihada si ay u arkaan midba midka kale oo aamin ah waxay awoodi doonaan inay sii wadaan jidadkooda si amaana. Darawalada ayaa sidoo kale aad ugu faraxsan sida fudud ee qulqulka taraafikada. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ku adeegsanno muraayadaha indhaha indhaha indhaha isgoysyada loo baahan yahay. Dhanka kale, kooxahayada Agaasinka Adeegyada Gaadiidka; gel Wuxuu sii wadaa shaqadiisa, taas oo ka hortagaysa qulqulka taraafikada si looga hortago baarkinka, wuxuuna cusbooneysiiyaa calaamadaha taraafikada iyo calaamadaha iyo isgoysyada dadka lugeynaya ee magaalada oo dhan. ”
Diyaarinta iyo wadooyinka isku xirka isgoysyada udhaxeeya Turhal iyo Tokat BS
Naqshadaynta isgoysyada heerka hadda ah ee TRNC sida isgoysyada gogoldhaafka ah üt
Wadooyinka waawayn ee Saxeexa Calaamadaha Khatarta ah
Guddoomiyaha Gobolka Zahteroğulları
Nidaamka iftiiminta ee Qulqulka
Wadooyinka naafada ah waxaa lagu sameeyaa isgoysyada
Sawirka cusub ee isgoysyada
95 million maal gashiga dhimista dhimashada ee Kemer
Cabbirka muraayadda Isgoysyada